Enoba ufuna ukulahlekelwa isisindo, ukunciphisa uxinzelelo, okanye ukucima intloko yakho kwaye uphume kwimvelo, ukuhamba ukuhambisa umvuzo ngokukhawuleza. Ngokucinga ukuba awukho ukhokelo lobomi obungasondelanga ngokupheleleyo, unokulandela amanyathelo ambalwa kwaye uqale ukuhamba ngokukhawuleza.
Ukuba ukhangele i-motivation ethile ukuba uphume kwiqhekeza uze uhambe , qwalasela ezi zizathu ukuqala ukuhamba.
Nangona kukho inani elikhulayo lophando oluthile, uphando lweenzuzo zokuhamba lusebenza ngokufanayo ukuhamba.
Ngokwe-American Hiking Society, ukuhamba ngeendawo kuhambisa iintlobo zempilo ezintle ngokubhekiselele kwimingcipheko embalwa. Ngokusebenzisa ukuhamba njengendlela yokuhlala usebenza ngokusemzimbeni, unokukwazi ukunciphisa umzimba, ukunciphisa isifo senhliziyo, ukunciphisa umfutho wexinzelelo, kunye nokunciphisa inkqubo yokuguga. Kwakhona kunika iingeniso zempilo yengqondo ngokunciphisa uxinzelelo kunye nokuxhalabisa.
Njengoko uhamba ngokuphindaphindiweyo, uya kuqala ukuhlakulela umgangatho ophezulu, izakhono kunye nokuthuthuzela kwindlela. Kodwa makhe sijamelane nayo, yintoni umsebenzi ongaphezulu komntu kunokuba uhambe ngeenyawo ezimbini?
Ubuhle bokuhamba ngelokungafani, luthi, ukulungiswa komhlaba, kwandiswa kwinto esenzayo ngokwemvelo kwaye yonke imihla. Uya kuphucula ixesha elide kodwa ikhefu lokuqala lokufunda liphantse lingekho.
Kulula ukunamathela ukuhambahamba ngenxa yokuba inqanaba lokukhungathekiswa kwabaqalayo liphantsi yaye unokulawula ubunzima bokusebenza kwakho kwaye ufumane ijubane elikusebenzelayo.
Xa kuthelekiswa nantoni nayiphi na enye imidlalo, ukuchitha kwakho okusemgangathweni ukulungiselela izinto ezihamba phambili kukuncinci.
Iibhola ezilungileyo , ezimbalwa zeengubo ezifanelekileyo, ipakethe ekhululekile kwaye ulungele ukuhamba.
Ngokubanzi, akuyiyo imidlalo yemigodi-kwaye akufanele ukhathazeke ngokuhlawula i-$ 275 ngexesha le tee.
Njengoko ufumana ngaphezulu ukuhamba, mhlawumbi uza kuthatha isigqibo sokuzama ukuhamba ngeeholide ngaphaya kwehlabathi. Kodwa ininzi yethu ifumaneka lula kwiipaki kunye nemimandla yendalo ngeendlela, ngoko akudingeki ukuba uchithe imali eninzi (okanye ixesha) ukuphuma ngaphandle.
Sonke sichitha ixesha elininzi kwiikhompyutheni nakwii-home under lights lights. Okanye uthumele umyalezo kunye nokubukela iTV (ngokuqhelekileyo ukuthumela imiyalezo ngelixa ukhangele iTV). Izintaba zikhuthaza ukuba uhambe ukusuka kwideskiti yakho uze uphinde uphume kwindalo.
Liyithuba lokufumana ihlabathi ngokuthe ngqo kwaye ngaphandle kwesihlungi, nokufumana kwakhona iziqu zemihla kunye namaxesha. Ukunyuka ngamava kungenakucatshulwa apho kungabikho ukulawula. Nangona umzila ohambele amaxesha amaninzi ngaphambi kokuba ukhulule umxhwele ogcina inzondo.
Ingaba ndingathini? Iqiniso libethekisa i-TV ngenye imini.
Unako Ukunyuka Ngomso
Ngokumalunga nokuhamba kwindlela enkulu yokuzisa abantwana kwilizwe langaphandle, kuyimidlalo yokuba baya kukwazi ukunandipha ubomi babo bonke. Nawe unako.
Imisebenzi emininzi nemidlalo iye yanciphisa ixesha lokuphila kubathathi-nxaxheba, mhlawumbi ngenxa yokulimala okanye imingeni yemigqaliselo (ngexesha lokugqibela unabantu aba-18 ndawonye kunye nomzuzu wokugqibela kumdlalo we-softball?).
Kodwa ngenxa yokuba uhambo luyimpembelelo ephantsi kwaye unokulindela nokulawula ubunzima kunye nobude bomsebenzi wakho, yinto enokuyenza ngokude emva kokuba imihla yakho yombhoxo iphelile.
Njengoko ukhula, awukwazi ukunyuka intaba ngokukhawuleza. Okanye ufihla iilidi ezingama-20 ngosuku. Kodwa ngeendlela ezininzi, uza kuba ngumgibeli ongcono. Ukuqonda kwakho kwendalo kuya kuphucula kwaye uza kuthatha iinkcukacha ezingaphezulu kunye neendlela ezihamba ngayo endleleni.
Ramadan Iincwadi zeBantwana
ITrrannosaurus Rex kunye neTriceratops - Ngubani owanqobayo?